Chọpụta 5 nke obodo French mara mma | Bezzia
Susana Garcia | 07/04/2021 10:00 | si ebi ndụ, njem
France bụ mba jupụtara na nkuku mara mma. Obodo ya nwere ụdị ma anyị hụrụ Paris ma ọ bụ Bordeaux n'anya, mana ọ ga-ekwe omume karịa ha chọta ịtụnanya French obodo ga-ume gị pụọ. Mgbe ụfọdụ, ị ga-esi n’obodo mepere emepe chọta ebe ndị kachasị ịtụnanya nwere ụdị mmadụ dị ukwuu.
En France e nwere ọtụtụ ndị mara mma obodo, ma taa, anyị ga-ekwu maka ise n’ime ha. Dị nleta ndị a masịrị gị, rịba ama ha niile n'ihi na nke ọ bụla nwere ihe na-atọ ụtọ ị ga-enye. Ya mere na-enwe ọhụụ ọhụụ ọhụụ ị ga-akara na France.
Obodo a dị na ngalaba Lot ma nwee ọtụtụ nleta, na-anọ n'azụ Mont Saint-Michel. Na mpaghara a enwererịị ọnụnọ mmadụ na Oke Paleolithic, ebe ọ nwere Cueva de las Maravillas, ọgba nke nwere ihe osise ọgba ochie. Ọ bụ obodo nke jisiri ike gbanwee Camino de Santiago na taa bụ njem nleta. Otu n'ime isi nleta na mpaghara a bụ nnukwu ụlọ, nke ị nwere ike ịhụ ọnụ ọnụ ugwu na echiche nke obodo ndị ọzọ. Gogbada ịhụ obodo ahụ ị nwere ike gaa Camino de la Cruz ma ọ bụ site na egwu egwu. Narị afọ nke XNUMX Puerta de San Marcial na-enye ebe nsọ na ebe nsọ mara mma. Ikwesighi ịhapụ ụka nke San Amador site na narị afọ nke XNUMX.
Ebe a, nke ndị mmadụ bi na XNUMX narị afọ nke BC, na-enye nnukwu ụlọ elu na-ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị. Medlọ elu a nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ na-enye anyị nnukwu mma. Ọ ka mma ileta ya n'oge dị ala ka ịghara itinye onwe gị na njem oke njem. Na nnukwu ụlọ elu nwere ihe karịrị kilomita atọ nke mgbidi nwere mpụga na ime ime ụlọ na n'etiti ha lizas, ala dị larịị nke gbara ụlọ elu ahụ gburugburu. N’ime ụlọ elu ahụ enwere ọtụtụ ụlọ elu, ọnụ ụzọ ámá ndị dị ka Ọnụ bonzọ Narmá Narbonne, nke na-abụkarị ọnụ ụzọ mbata, na ọbụna nnukwu ụlọ. Anyị kwesịrị ịhụ Basilica nke Saint-Nazaire, ya na ụfọdụ ihe ndị Romanesque ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Gothic anya.
Obodo a dị na Camino de Santiago na ndịda France. Na Conques ị ga-enwe ezigbo ịgagharị n'okporo ámá ya, na-ahụ ihe owuwu nke ụlọ ya, na-eji osisi na osisi rụọ ụlọ. Nnukwu ihe ncheta nke obodo ahụ bụ Esdị Romanesque Abbey nke Conques nke a na Portico nke Ikpe Ikpeazụ pụtara. N'ime ya ị nwekwara ike ịhụ Treasury Museum na ntụkwasị obi. Ihe a na-agaghị echefu echefu bụ ebe ndị ọrụ aka na obere ụlọ ahịa dị n’obodo ahụ.
Nke a bụ weere obodo kachasị mma na Alsace. Ọ nwere peculiar okirikiri nhọrọ ukwuu maka azụmahịa nzube. Ihe dị ka kilomita ise site n'ebe ahụ enwere echiche iji mata ọdịdị obodo a. Ga-aga leta Rue du Rempant n'ihi na ọ bụ n'okporo ámá ebe anyị nwere ike ịhụ ezigbo njirimara ụlọ nke obodo ahụ. Nke a bụ foto kachasị ese foto n'obodo ahụ, ụlọ Le Pigeonnier nke dị n'akụkụ nkuku ma kewaa n'okporo ámá abụọ. Anyị ga-ahụkwa Ebe du Chateau, nke kachasị mkpa n'obodo ahụ na Fontana de Saint Leon mara mma n'etiti.
Nke a bụ otu n'ime obodo ndị ahụ mara mma nke na-ekwesịghị ịhapụ. Ọ bụrụ na ị banye na Rue Grande ị ga - ahụ Ebe de la Grande Fontaine nke bụ ụlọ ahịa ochie. N'azụ ya bụ Ogige Churchka, ya na Churchka nke ntughari nke Saint Paul. N’ebe ndịda enwere echiche dị n’ebe a na-eli ozu, ebe a na-enye echiche kachasị mma n’obodo ahụ dum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Obodo 5 dị na France ebe ịchọrọ ibi